Warbixintii ugu danbeysay COVID19 Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbixintii ugu danbeysay COVID19 Itoobiya
Warbixintii ugu danbeysay COVID19 Itoobiya
warbixintii ugu danbeysay xaalada xunuunka saf marka ah ee COVID19 Ethiopia ayaaa maanta laga helay Tirada ugu badneyn COVID-19 Ethiopia waxay xaqiijisay kiisasku inay kor u dhaafeen tirada xanuunku soo ritey 1000
waxaa laga helay 95 qofood ayaa laga helay COVID-19 24-kii saac ee ugu dambeeyay tijaabada shaybaarka tiro dhan 5, 034 qof. Tani waxay keenaysaa wadarta kiisaska la xaqiijiyey ee Itoobiya 1,063.
** Dhanka kale, 11 qof ayaa soo kabsaday 24-kii saac ee la soo dhaafay, kuwaas oo wadarta guud ee la soo celiyay ah ku dhaafay 200 mark, ilaa 208
** Tirada bukaanka #ICU ayaa iyaguna gaadhay 5.
Asalka bukaan socodka
** 30 ka mid ah 95 waxay leeyihiin taariikhda safarka dibedda, 4 waxay leeyihiin raad-raac xiriir ah bukaannadii hore inta soo hartayna 61 ma laha taariikh safar iyo xiriir la yaqaan. Waxay ka mid yihiin heerka naxdinta leh ee #CommunityTransmissions.
** 95, 71 waa rag halka 24 ay yihiin haween ay da’doodu u dhaxayso 15 ilaa 80 sano jir. Dhammaantood mooyee waa #Ethiopiyaan. 1 waa muwaadin #Indian ah.
** 95, 56 waxaa lagu cadeeyay #AddisAbeba; 22 waxay ka yimaadeen #Oromia, tirada ugu badan ee hal maalin ah gobolka (eeg jaantuska); 5 waxay kasoo jeedaan gobolka #Amhara, 3 mid walbaa wuxuu kasoo jeedaa #Somali, #Tigray iyo #Harari gobolada; 2 waxay ka socdaan #DireDawa Maamulka Magaalada; iyo 1 waa gobolka #Afar gobolka.
Itoobiya ilaa iyo hadda waxay sameysay 106, 615 tijaabooyin shaybaar, waxayna 845 bukaan ah ku leeyihiin xarumaha daaweynta / karantiimada kala duwan.
Previous articleWarbixintii ugu danbeysay COVID19 SOMALILAND
Next articleCovid19 maanta intii laga helay somaliland
Degdeg:somaliland oo warqad Diidmo ah u Dirtey wasaarada arimaha...
Qaraxyo lagu hoobtay oo ka dhacay Dalka Sri lanka